गुल्मीमा कुन दलले कति मत पाए ? - Everest Dainik - News from Nepal
गुल्मीमा कुन दलले कति मत पाए ?
२०७४, ५ श्रावण बिहीबार
गुल्मी, साउन ५ । नम्वर प्रदेश अन्तरगत गुल्मीको स्थानिय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस भन्दा नेकपा एमाले १३ हजार भन्दा बढि मतले अगाडी रहेको तथ्य वाहिर आएको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वाजानिक गरेको तथ्याङकबाट यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।
धेरै स्थानमा जनमोर्चा संग तालमेल गरेको एमालेले उक्त पार्टीको सहित ४८.८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै १२ स्गानिय तह मध्ये ५ स्थानमा मात्र माओवादी केन्द्र संग तालमेल गरेको कांग्रेसले सो पार्टीको मत सहित ३७.९४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले धेरै स्थानमा रुख चिन्हबाट उमेदवारी दिएकोले उसको मत प्रतिशत एकदम कम प्राप्त गरेको देखिएको छ । उसले जम्मा १२.०७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । जुन मत पालिका प्रमुख उमेदवारको मात्रै हो ।
जिल्लाका कुल १ लाख ८० हजार ७ सय ७५ मतदाता रहेकोमा १ लाख २६ हजार ३ सय ७४ मत अर्थात ६९.९१ प्रतिशत खसेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मातृकाप्रसाद मसारीनीले जानकारी दिए ।
उनले दिएको जानकारी अनुसार खसेका कुल मत मध्ये ५ हजार ७ सय ८७ मत वदर भएको थियो । सदर मत मध्ये केहि स्थानमा जनमोर्चा सहित नेकपा एमालेले जिल्लाभर ५८ हजार ८ सय १७ मत प्राप्त गरेको छ ।
केहि स्थाना माआबादी केन्द्र सहित कांग्रेसले ३७ हजार ४५ हजार ७ सय ५६ मत प्राप्त गरेको छ । धेरै स्थानमा कांग्रेस संग रुख चिन्ह लिएर उमेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रको मत सख्या भने निकै कम देखा परेको छ । उसले ५ स्थानिय तहमा कांग्रेस संग तालमेल गरेकोले मत संख्याको महल शुन्य छ ।
याे पनि पढ्नुस राजनीति गर्ने शिक्षक कारबाहीमा
७ स्थानिय तहको प्रमुख उमेदवारको मात्रै मत सख्या गणना भएको माओवादी केन्द्रले जम्मा १४ हजार ५ सय ४९ मत प्राप्त गरेको तथ्याङकमा उल्लेख छ । प्रमुख दुई दल एमाले र कांग्रेस मध्ये एमाले काग्रेस भन्दा १३ हजार ६१ मतले अगाडी देखिएको छ ।
जिल्लाभर ८ सय ८४ मत ल्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चौथो शक्तिका रुपमा उदाएकोृ छ । ३ सय ३८ मत ल्याएर राष्ट्रिय जनमाृर्चा पाँचौ शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ ।
नयाँ शक्ति नेपालले जिल्लाभर ९२ मत ल्याएर छैठौ शक्ति र २२ मत ल्याएर अखण्ड नेपाली पार्टी सातौं शक्ति बनेको छ । बरु जिल्लाभरका स्वतन्त्र उमेदवारले १ सय २९ मत ल्याएका छन् ।
तर क्रियाशिल राजनैतिक दलका रुपमा स्थापित भएर विकासे कार्यक्रम बाँडफाँडमा दलिय सहमति खोज्दै टेवुल बजार्ने नेपाल परिवार दल र नेकपा मालेले एक मत सम्म ल्याउन सकेनन् ।
तहगत मत सख्या यस्तो छ
२ नगरपालिका र १० गाउँपालिका मध्ये रेसुङ्गा नगरपालिकामा एमालेले ६ हजार ३ सय ८८ मत प्राप्त गरेको थियो । कांग्रेसले ६ हजार २ सय ४१ मत प्राप्त गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले ४ सय ३५ मत , जनमोर्चाले ६३ मत र अखण्डले २२ मत पाएको थियो । अरु शुन्य छन् । बरु स्वतन्त्रले ५० मत प्राप्त गरेका छन् ।
मेयरका एक जना स्वतन्त्र उमेदवारले आफुले आफैलाई भोट नदिएर मत सख्याको महल शुन्य पारेका छन् । १८ हजार ३ सय ४१ मतदाता रहेको यस नगरपालिकामा कुल १३ हजार ५ सय ४३ मत खसेको थियो । जस मध्ये ३ सय ४४ मत बदर भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस रिडीवगरको वालुवामा तरकारी खेती सुरु
कुल खसेको मतः १३३९६
एमालेको मत सख्याः ६६६८
कांग्रेसको मत शंख्याः ५५८७
माओवादी केन्द्रः ७१३
राप्रपाः ३९ मत
जनमोर्चा : ७३ मत
कुल मतदाता संख्या १३८४०
खसेको कुल मत : ९७३३
वदर मतः ५८४
एमालेको मत सख्या ः ५०५५
कांग्रेसको ः ४०००
माओवादी केन्द्रकोः शुन्य (कांग्रेस संग तालमेल, प्रमुख पदको उमेदवारी फिर्ता गरेको )
राप्रपाः १४ मत
जनमोर्चा ः ७३ मत ्अरु शुन्य
मतदाता संख्या १२६३४
खसेको कुल मतः ८६२७
वदर मतः ५१६
काग्रेस , माओवादीः ४२९८
एमाले , जनमोर्चा ३७७०
स्वतन्त्रः २ मत
याे पनि पढ्नुस नेताको कमाइखाने भाँडको बेहाल
गुल्मी दरवार गाउँपालिका
कुल मतदाता सख्या १५३७०
बदरः २८१ ( अन्य स्थान भन्दा सवै भन्दा कम )
काग्रेसको प्राप्त मतः५५७५
माओवादी केन्द्रको ः २४४
कुल मतदाता संख्याः १३३९३
माओवादी केन्द्रः २२३८
नयाँशक्ति ः २१ मत
जनमोर्चाः ६९ मत
स्वतन्त्रः १ मत
कुल मतदाताः १५५११
कांग्रेस, माओवादीः ५११४
नयाँशक्तिलः ११ मत
मतदाता संख्याः १५६५०
खसेको मत ः११२४७
कांग्रेस माओवादीः ५११६
वदरः ८२१ ( सवै स्थान भन्दा बढि )
माओवादी केन्द्रः ७२५ मत
राप्रपाः ३९ मत ््अरु शुन्य
मतदाता संख्या १३५४२
कांग्रेस माओवादी केन्द्रः३७६३
स्वतन्त्र ७५ मत
मतदाता संख्याः १५५७१
कांग्रेस माओवादी केन्द्रः ५१९७
एमाले जनमोर्चा ५१३३
सवै दलको मत संख्या नगर र गाउँप्रमुखको मत संख्यामा मात्र आधरित छ ।